न्यूज सञ्जाल: » फेसबुकमा आमाको फेस !
न्यूज सञ्जाल २१ बैशाख २०७६, शनिबार ०८:३४
माघमा एउटा बिहेमा जन्त गएको बेला गाउँमा आमासँग भेट भएको थियो । त्यसपछि कहिलेकाहीँ फोनमा गफ गर्नुबाहेक उसले आमालाई सम्झने फुर्सद पनि पाएको थिएन । आज त सम्झनै पर्यो १
ओहो १ आज त फेसबुकभरि आमै आमा १ कसैको आमा सेतै फुलेकी । कसैको आमा भर्खरकी । कसैका आमाको नाक चुच्चो । कसैको आमाको नाक थेप्चो । यसको आमा यस्तो, उसको आमा उस्तो । अरुको आमाको फोटो हेर्दाहेर्दै अघि आफूले राखेको आमाको फोटोमा पनि १० वटा जति लाइक आइसकेछ ।
‘अँ राखे नि, खै तिमीले कुन फोटो राख्यौ रु ए आफ्नी आमाको मात्र राखेको रु घरको आमाको पनि राख न’, श्रीमतीको मोबाइल हेर्दै भन्यो ।
‘बाबा हजुरले पनि गाउँकी आमालाई विश गर्नुभयो त ? सानो छोराले सोध्यो ।
छोरीको कुरा सुनेर उ टोलायो । हो त आमाको मोबाइलमा त फेसबुक चल्दैन । फेसबुक चले पनि हेर्न जान्नु हुँदैन । ‘आ… आमाले हेर्न नजानेर के भयो त रु आमालाई कत्तिको माया गर्छु, सम्झन्छु भन्ने कुरा अरुले त थाहा पाउँछन् नि फेसबुक हेरेर’ भन्दै उसले चित्त बुझायो ।
तर सबैले खेती नगर्ने, गाईभैंसी नपाल्ने हो भनेर मुखमा माड चाहिँ के ले लगाउने रु सबैका बाआमा चुप लागेर बस्ने हो भने धानमकै कसले फलाइदिन्छ रु गाईभैंसीको दूध कहाँबाट आउँछ ?
शहरमा बसेर किनेर खाने बानी भएका छोराबुहारीलाई यो कुरा के थाहा रु त्यसैले आमाको मन मान्दैन । आमाले एउटा गाई र दुइटा बाख्रा पालेकी छिन् । सकिनसकी घाँस काट्छिन् । कुँडो पकाउँछिन् । भकारो सोहोर्छिन् ।
घिउ पठाएको भाँडो घर पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमालाई लाग्छ । तर बुहारीले कहिले त्यही भाँडोमा अचार गाड्छिन् । कहिले मसला हालेर राख्छिन् । दशैँमा घर आउने बेला छोराले ‘के लेइदिउँ ? भनेर सोध्दा आमाले ‘अस्ति नै घिउ पठाएको भाँडो भए हुन्छ बाबु’ भनेकी थिइन् । तै पनि छोराले खाली भाँडो घर लैजान बिर्सियो । तल्लोघरकी पसले बहिनीले चकलेट सकिएपछि खाली भाँडो दिने गरेकी छिन् । आमाले त्यसमै काम चलाउँदै आएकी छिन् ।
‘आमा घिउ पसलमा किन्न पाइन्छ हो रु’ नातिले सोध्छ ।
‘घिउ कसरी बन्छ आमा रु’ नातिले फेरि सोध्छ ।
छोराछोरीलाई कोर्सबुकको जोहो गर्दागर्दै आमा आफैले कोर्सबुक त पल्टाउन पाइनन्, फेसबुक के थाहा रु तै पनि छोराछोरीले फेसबुकमै भए पनि धेरै सम्झिएका रहेछन्, माया गरेका रहेछन् भनेर आमा गद्गद् छिन् । छोराछोरीले फेसबुकमा राखेका फोटोको फेसझैँ आज उनको फेस पनि उज्यालो छ ।